Happy Fathers Day Wishes In Nepali: Happy Father’s Day Quotes, Wishes, SMS, Messages, Images
HomenewsHappy Fathers Day Wishes In Nepali: Happy Father’s Day Quotes, Wishes, SMS, Messages, Images
Happy Fathers Day Wishes In Nepali:
Happy Fathers Day Wishes In Nepali
1. मेरो भगवान तिमीलाई धन्यवाद
मेरो भगवान तिमरो यो कर्म
मेरो बाबुको मायाको माया सबैभन्दा बढी
यही प्राथना छ, म गरि राख्छु हरदम
जसको औला समाती हिडन सिके
जानेको हरेक मुश्किल देखि बाहिर निकाले
एक दिन उनको नाम, आफनो प्यारो पापा लाई मेरो सलाम
2. मनको कुरा थाहा पाए जो
आँखाले पढिहाले जो
पिडा होस चाहे तयो खुशी
आँशुको पहिचान गरिहाले जो
उनी हस्ती जो एकदम माया गरे
पापा नै हो त्यो जो बच्चाको लागि बाँचे
3. म तपाईलाई मेरो हृदय गहिरो बाट प्रेम गर्दछु र सँधै गरिरहनेछु । म अनुभव गर्छु, तपाई सधै मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईले सधैं मेरो पछि पछि लाग्नुभयो । तपाईले जे गर्नुभयो मेरो लागि त्यो नै धेरै छ । कसैलाई तपाईको ठाउँमा प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । बुबा दिवसको आजको शुभ अवसरमा हजुरलाई मंगलमय शुभकामना ।
4. यहाँ कोही पनि बुवा जस्तो छैन, जस्तो तपाई बुवा हुनुहुन्छ । तपाईं धेरै असाधारण हेरचाह गर्ने र मायालु हुनुहुन्छ र मेरो जीवनलाई उज्ज्वल बनाउनको सराहनीय व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । बुवा दिवसको शुभकामना! मेरो सबै धन्यवाद र प्रेम तपाईको लागि । बुवाको मुख हेर्ने आजको दिनमा तपाईलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
5. यदि यस संसारमा एक व्यक्ति छ जो मलाई साँच्चै प्रेम गर्दछ, मलाई हेरेर जिउने गर्दछ र मलाई सजिलै आत्मसात गर्छ भने त्यो तपाईं हो । तपाई मेरो प्रेम हुनुहुन्छ । म तपाईंलाई जीवन भरी खुशी दिन चाहन्छु । बुवा दिवसको शुभकामना!
6. तपाईं साहसी हो र मेरो बुवा तपाई नै मेरो खुशी हो । बुबा दिवसको आजको शुभ अवसरमा हजुरलाई मंगलमय शुभकामना ।
7. प्रिय बुवा, जहाँ सम्म मेरो दैनिक जीवनमा जे जति जोनको छु, तपाई नम्बर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ । हृयापी फादर्स डे ।
8. महान परिस्थिति र भयानक परिस्थिति दुबैमा तपाईंले आर्श्चर्यजनक आचरण देखाउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ! बुवाको मुख हेर्ने आजको दिनमा तपाईलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
9. बुवा, तपाईंले मलाई हरेक दिनको दैनिक जीवनमा उत्कृष्ट चीज दिनुभएको छ, तपाईंको हेरचाह र तपाईंको माया । म साँच्चै तपाईंलाई आफनो जीवनमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । बुवाको मुख हेर्ने आजको दिनमा तपाईलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
10. जब म बच्चा थिएँ, बच्चा हुँदा मैले गर्ने हरेक कार्यलाई तपाईले आफूसँग सेयर गर्नुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद । जब मलाई जे जे चाहियो, आमाबाबुको रूपमा उत्तम व्यवहार गर्नुभयो । मलाईं थाहा छ कि कि तपाईं उत्तम व्यक्ति हुनुहुन्छ र सर्वोत्तम बुवा हुनुहुन्छ । हृयापी फादर्स डे ।